काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरु सबै क्षेत्रलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामल लगायतका दैनिक उपभाेग्य खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।त्यस्तै सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु शुल्क छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।त्यस्तै सरकारले श्रमिकलाई २०७६ चैतको तलब एडभान्समा दिनुपर्ने, व्यवसाय संचालन नभएसम्म उक्त तलब प्रतिष्ठान कल्याणकोषको रकम प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेको छ।
१६ चैत्र २०७६, आईतवार २२:०५
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरु सबै क्षेत्रलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामल लगायतका दैनिक उपभाेग्य खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
त्यस्तै सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु शुल्क छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै सरकारले श्रमिकलाई २०७६ चैतको तलब एडभान्समा दिनुपर्ने, व्यवसाय संचालन नभएसम्म उक्त तलब प्रतिष्ठान कल्याणकोषको रकम प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेको छ।
Prevघर भाडा छुट दिन सरकारको आग्रह, घरबहाल कर मिनाहा हुने
अतिआवश्यकीय वस्तु आपूर्ति सहज गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको मागNext